I-Lava Lookout - Pakaʻa - I-Airbnb
I-Lava Lookout - Pakaʻa
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Lauren
I-Lookout odakeni oludala lugeleza epharadesi elinezinsuku ezinelanga nobusuku obucwebile obunezinkanyezi. Jabulela i-Milky Way kanye nokunethezeka endaweni ephuma ngaphandle kwegridi enendawo yokudonsa amanzi, ilanga, nezithelo. Lapha emngceleni lapho udaka lubingelela ilanga kuba nephathi yamasonto onke njalo ngolweSithathu. I-Kehena Black Sand Beach 5.8 miles away. Igumbi le-Paka'a lingesinye sezitudiyo ezine ezizimele ezifaka i-wifi nekhishi elihlanganyelwe/lisebenza kahle kumaqembu amakhulu. Bheka okunye ukufakwa kuhlu kwethu (Pele, Nāmaka, Kāne) ukuze uthole ukubuyekezwa okwengeziwe nemininingwane.
Uzokwazi ukufinyelela ekamelweni le-studio elizimele ngokuphelele kanye nokugeza kwangasese. Kunendawo okwabelwana ngayo esizeni enezinsiza zokupheka (isitofu, uhhavini, ifriji, itafula elikhulu lemibuthano).
**LELI CISHE INGENYE YEZINDLO EZIHLALA KAKHULU EZISEKHONA, IZILUNGU ZENZEKA LAPHA. KUSEBENZA KANJANI NJE **
Kukhona ukwakhiwa okuqhubekayo ezindaweni ezivamile (amagumbi njll. aphelile), kodwa sicela ulindele futhi uqonde ikhwalithi ethile engaqediwe yendawo. Ngeke kube khona ukwakhiwa phakathi namahora lapho izivakashi zethu zikhona.
Amakamelo okulala ngalinye linikeza umatilasi wegwebu lenkumbulo entsha sha (usayizi wendlovukazi), imicamelo yegwebu lenkumbulo, amagumbi okugeza angasese anomfutho omkhulu wamanzi, amanzi ashisayo athembekile nezindlu zangasese ezishaywayo.
Ngempela ngeke uze uqaphele ukuthi ukulava noma ukucisha igridi kuyilapho ulala ubusuku obumangalisayo. Kodwa, ngeke kukuphunyuke isikhathi eside, vele uphumele phezu kwamadekhi kanye nendawo embozwe yompheme ukuze uthathe ubuhle bendawo.
Siyaqhubeka nokwakha iqoqo lethu lezinto ezimangalisayo ezihlose ukuhlanganisa: ukuqashwa kwamabhayisikili, amalambu ekhanda, obhece, ojosaka ukuze sigcine izinto zakho ngenkathi uhamba odakeni, igiya le-scuba njll. Imidlalo yebhodi, imidlalo yamakhadi nokunye kuyaqhubeka futhi.
Kunamayunithi amane kuya kwamahlanu esizeni ukuze ube nethuba lokuzihlanganisa nabanye ohamba nabo futhi okungenzeka ukuthi uhlangane nabantu abavela kuwo wonke umhlaba - inzuzo yendawo efana nehostela kodwa indawo ephambili enobumfihlo ehlanganisiwe; ngempela best of yonke imihlaba.
Okokugcina, siyaqhubeka nokwenza ngcono indawo; umbhoshongo omangalisayo wokuma wodwa onamandla okubuka izinkanyezi - isibhakabhaka lapha asinakho konke ukungcoliswa kokukhanya konga inyanga nokubonakaliswa kodaka ngakho-ke zilungiselele ukugqolozela ngokumangala izinkanyezi ezidubulayo noma ekugcineni ugqolozele isibonakude. Konke ukuthuthukiswa kuyaqhubeka futhi kungase kuqedwe noma kungaqedwa ngesikhathi ubhukha ukuhlala kwakho. Kungakhathaliseki ukuthi, woza ujabulele i-oasis encane phakathi kwe-lava - ulethe umoya wakho wokuzijabulisa nokudla okuhle, ukuzijabulisa okuhle nabantu abalungile bayokuthola :).
Uhamba neqembu elikhulu? Bheka ezinye izinhlu zethu ukuze zitholakale noma uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane.
I-HDTV engu-42" ene- I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, Disney+, I-HBO Max, Hulu, I-Netflix, I-Roku
4.87 · 285 okushiwo abanye
I-Kalapana ihlukile. Woza uvakashele umlingo wokugeleza kwe-lava yeminyaka engama-30. Ngisho noma udaka lungagelezi, lokhu kungenye yezindawo ezihluke kakhulu emhlabeni. I-Pahoa, isigodi esincane esihle kakhulu siqhele ngemizuzu engama-20 - noma ugijimele kuMalume uRoberts ukuze uthole indawo yokupaka futhi uthenge noma imakethe yasebusuku ngoLwesithathu (akumele kuchazwe - ukuze ube nesipiliyoni :)).
Isibuyekezo: I-lava ishintsha nsuku zonke. Ukugeleza kwe-lava kwakamuva kwehle kwaphela futhi okwamanje alukho udaka oluncibilikisiwe noma kuphi esiqhingini. Sicela ukuzwela kwakho komphakathi wethu phakathi nalokhu kuguquguquka kokugeleza kweLava. Ukubuka kolwandle kanye nokubukwa kweNtaba. Impilo yeLava Ethule Yazo zonke izigigaba nezihambi. Kokua. Uzinakekele. Aloha.
Sicela uqonde ukuthi udaka lwentaba-mlilo aluhlali lugeleza, nakuba ukubukwa kolwandle lwentaba namawa kuhlala kutholakala. Lena indawo ethule phezu kodaka, sicela uhloniphe indawo yakho kanye nabantu.